Lunar Eclipse: Ihe onye amụmwa kwụrụ maka ọchịchịrị ikpuchi ọnwa - BBC News Ìgbò
Lunar Eclipse: Ihe onye amụmwa kwụrụ maka ọchịchịrị ikpuchi ọnwa
27 Julaị 2018
Media captionIhe onye amụmwa kwụrụ maka 'Lunar Eclipse'
Otu ụkọchụkwụ a mara dịka 'Pastọ Abel' ekwuola na maka ọchịchịrị ikpuchi ọnwa bụ ihe ahịma, ihe nke mụọ nke Chukwu ma maka ya.
Pastọ Abel, onye nke kwuru nke a oge ya na onye ntaakụkọ BBC nwere mkparịtaụka kwuru na o nweghị nsogbu ọbụla maọbụ ọrịa ọ ga-ebute.
Ọ gara n'ihu kwuo na ụdị ya bụ ihe ahịma emebuola n'afọ 1947.
Ọkammụta Augustine Ubachukwu bụ onyeisi "Astronomy and Astrophysics Research Group" na mahadum Nsukka (UNN), kwuru na ọchịchịrị ga-ekpuchi ọnwa (ihe Bekee kpọrọ 'lunar eclipse') ruo otu elekere n'abalị taa.
N'akwụkwọ ozi Ubachukwu binyere aka, o kwuru sị "Ọchịchịrị ga-ekpuchi ọnwa na Naịjirịa na Fraịde, Julaị 27, ma ihuigwe dị mma. A ga-ahụ ya site mgbe ọ ga-eji ọkara gafee elekere itoolu ruo mgbe ọ ga-eji nkeji 20 gafee elekere 11.
"Ndị nọ na mpaghara "Eastern Hemisphere" nke mbaụwa nke bụ Yurop, Afrịka, Eshịa, Ọstralia nakwa Niu Ziland, ga-ahụkwa ya.
Etu ị ga-esi echekwa onwe gị n'ọkọchị
Etu Abia na Enugwu si ejikere maka ide mmiri
Etu ihuigwe dị n'afọ a bụ maka mgbanwe a na-ekwu maka ya n'ụwa niile - Ndị sayensị
"Ọ ga-abụ nke kacha ogologo nke anya hụrụla n'ime narị afọ a (century) maka na ọ ga-anọzu otu elekere na nkeji 43. Ọ ga-eji ọchịchịrị na-ekpuchighị kpam kpam bido n'elekere 7:24pm, ebe nke ga-ekpuchi kpamkpam ga-ebido n'elekere 8:30pm ma bie n'elekere 10:13pm.
"Mkpuchi ọnwa nke kacha elu ga-eme n'elekere 9:22pm, mana nke na-ekpuchighị kpamkpam ga-ebi n'elekere 11:19 nke abalị."
Ubachukwu kwuru na ụfọdụ mpaghara Saụt Amerịka ga-ahụ ebe ngwụcha mkpuchi ọnwa a ma anwụ daa taa, ebe ndị Niu Ziland ga-ahụ mbido mkpuchi ọnwa tupu anwụ amalite echi.
Nkenke aha onyonyo Ọchịchịrị a ga-eme makana ọnwa ga-anọchi ụzọ anwụ si ahụ ọnwa
O kwukwara na ọchịchịrị ikpuchi ọnwa na-eme naanị ụbọchị ọnwa juru eju, ma kwuo na kama ikpuchi anya etu e si eme ma ọ bụrụ mgbe anwụ kpuchiri ọnwa, na a ga-elenwu nke a anya na-enweghị ihe mmerụ ahụ ọbụla.
O kwukwara na mkpuchi ọnwa ọzọ a ga-ahụ anya na Naịjirịa ga-eme n'ụbọchị 21 nke ọnwa Jenụwarị nke 2019.
Ọchịchị Buhari bụ 'Demon-cracy' ọ bụghị Democracy - Fr Mbaka
Anambara steeti: Obi adịghị anyị mma maka nwa idemmiri buru
Vidio Ị mara ihe ọfọ bụ n'ala Igbo?
Ndị Igbo na chi ha na-efe
13 Julaị 2018
Dino Melaye na-efu efu kemgbe ụtụtụ Tọọsde
Etu idemmiri siri gbuo nwata n'Anambara steeti
"Buhari oge mgbanwe eruola" - Fr. Mbaka
Ekele dị iche iche e ji mara ndị Igbo
'Ụmụakwụkwọ FUTO tọrọ na Croatia ga-alọta mgbe n'adịghị anya' - Abike Dabiri
Ọgbaghara dara n'ụlọikpe ka DSS anwụchiaghrịrị Sowore